पर्साको अपराध नियन्त्रण टोली नै चोरीको गाडी प्रयोग गर्दै - Birgunj Sanjalपर्साको अपराध नियन्त्रण टोली नै चोरीको गाडी प्रयोग गर्दै - Birgunj Sanjalपर्साको अपराध नियन्त्रण टोली नै चोरीको गाडी प्रयोग गर्दै - Birgunj Sanjal
पर्साको अपराध नियन्त्रण टोली नै चोरीको गाडी प्रयोग गर्दै
५ भाद्र २०७६, बिहीबार १७:२४
वीरगन्ज | जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले अपराध नियन्त्रणको लागि खटाएको अपराध नियन्त्रण टोलीले नै चोरीको गाडी प्रयोग गर्ने गरेको ख’लेको छ . अपराध नियन्त्रणका लागि पर्साका एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौंरले आफनो विश्वासिलो पात्रको ?
पमा खटाएका प्रहरी नायब निरिक्षक विद’र शिवाकोटीले चोरीको भारतीय गाडी प्रयोग गरीरहेको ख’लेको हो .क्राईम टोलीले करिब एक महिना अगाडी बाराको सिमाना स्थित गण्डक बह’अरी एरियाबाट एसके.)!
पिबी ३७६३ नम्बरको भारतीय स्कारपियो गाडी अन’सन्धानको लागि पक्राउ गरेको थियो . पक्राउ परेको गाडी चोरीको रहेको भएतापनि राजश्व कार्यालय पथलैया वा वीरगन्ज भंसार कार्यालयमा नब’झाई निजि काममा प्रयोग गरेको ख’लेको हो . अपराध नियन्त्रणको नाममा प्रहरी नायब निरिक्षक शिवाकोटीले आफनो व्यक्तिगत काममा उक्त चोरीको गाडी प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ . स्थानिय प्रशासनले भारतीय गाडी नेपाल प्रवेशमा
कडाई गरेपछि ईन्ट्री फेल अथवा तत्काल कागजपत्रमा केहि कमि भेटिए लगतै गाडी पक्राउ गरे लगतै वीरगन्ज भंसार वा राजश्व कार्यालयमा ब’झाउँने गरेका छन . तर शिवाकोटीले पक्राउ गरेको चोरीको गाडी हाल सम्म प्रयोग गर्दै आएका छन . उनको यो रवैयाले वीरगन्जको चोरीको घटनामा समेत दिन प्रतिदिन बृद्धि ह’दै गएको छ . जिल्लामा घटने चोरीको घटना नियन्त्रण गर्ने निकायले नै चोरीको गाडी प्रयोग गर्न’ कति न्यायचित ह’न्छ आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ .